Somali News 05.10.21 | KWIT
Dhanka kale, kiisaska waxay kusii socdaan raadadka hoose ee Dakota Dakota, hal dhimasho oo dheeri ah iyo 77 cuduro cusub oo coronavirus ah.
Iowa waxay heli doontaa ku dhowaad $ 1.5 bilyan oo gargaar ah iyada oo loo eegayo qorshaha dowladda federaalka ah ee lagu caawinayo gobollada ay ku dhufteen aafada. Waa dadaal lagu doonayo in lagu soo celiyo shaqooyinkii lumay intii lagu jiray aafada iyo in dib loo buuxiyo khasnadaha dawladaha ee arkay hoos u dhac weyn ee dakhliga canshuuraha.
Nebraska waxay heli doontaa qiyaastii $ 1 bilyan.
Ku dhowaad kalabar dadka qaangaarka ah ee Nebraska ayaa hadda laga tallaalay cudurka loo yaqaan 'coronavirus'. In ka badan 1.5 milyan oo qiyaas ah oo tallaallada ah ayaa la siiyay dadka jira 16 sano iyo ka weyn. Ololaha loogu talagalay in loo qeybiyo tallaalada ayaa sii wadaya in horumar laga sameeyo guud ahaan gobolka in kasta oo xawliga talaalka uu hoos u dhacay todobaadyadii la soo dhaafay maadaama dalabkii uu daciifay.